Happy Birthday princeakarit — MYSTERY ZILLION
Happy Birthday princeakarit
1 member is celebrating their birthday on 03-12-2009:
-princeakarit (Age: hidden or unknown)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မင်းသား ဧကရစ်ကြီးကို.. ဦးဆုံး..ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်နော်.....
ပျော်ရွှင်စရာ မွေးနေ့လေးဖြစ်ပြီးတော့.......စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာနဲ့ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်း နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ...
ကိုရွာစား (ခ) ကိုပုရစ်ရေ
မွေးနေ ့မှာ အတိုင်းမသိ ပျော်ရွှင်ပါစေလို ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်..
မွေးနေ ့ကိတ်လေး ပါ ပို ့ပေးလိုက်ပါတယ်....
Happy Birthday!!!!! :D:D:D:D
ဟက်ပီးဘက်ဒေး နော် မယ်ပရစ် ... မဟုတ်ပါဘူး ကိုပရင့်:)
အော်ဒါနဲ့ ...ဟက်ပီးဘက်ဒေးဆိုတာ ... hack ပြီး ပိုက်ဆံတွေ ဘက် ခိုင်းတဲ့ day
နောက်တာပါဗျာ ...ခင်လို့ .... မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွင်၊ရွင်လန်း၊၀မ်းသာ ပါစေ......:6:
မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ ကိုပရင့် :6::6::6:
Happy Birthday ကိုပရင့် !!!!!!!!!!!!!!!!!
မွေးနေ့က စလို့ ပျော်ရွှင်မှုတို့ဖြင့်သာ တွေ့ကြုံရပါစေ။
ကိုပရင့် နှင့် ဧကရာဇ်တို့ မွေးနေ့မှသည်နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ အိုအောင်မင်းအောင်.. အဲအဲ.. .. ရောကုန်ပီ.. :d ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့ပေါင်းများစွာပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့...:5::6:
har pe birthday ...:D
ကိုဧကရစ် မွေးနေ့မှသည် တစ်သက်လုံး ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါစေလို့
December 2009 edited December 2009 Registered Users, Moderators
ကိုပရစ်ရေ အစ်ကိုမနေ့ကပြောသလိုပဲ ယနေ့မွေးနေ့မှစပြီး တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် ထမ်းဆောင်နိုင်ပါစေဗျာ။ ကိုကိုဝင်းကတော့ပြောတာပဲ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုး = လိပ်မလေး ဆိုလား ဘယ်ကလိပ်မလေးလဲတော့မသိဘူး ကိုကိုဝင်းပြောတာ
I wish you can give many helpful things for people.
happy birthday my friend..............
Wish you all the best can get........!
ငါ ့တူကြီးရဲ ့
ယခုမွေးနေ ့ရက်မြတ်ကစပြီး ၊
ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ပြီးပြည် ့စုံပါစေ ။
ဘ၀တလျှောက်လုံး အစစ အရာရာ အဆင်ပြေပါစေ ။ !!!
Happy BirthDays ပါခင်ဗျာ...ကျွန်တော်မွေးနေ့ကြရင်လဲလာနော်
ပျော်ရွှင်စရာမွေးနေ့ ပေါင်းများစွာကိုချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဗျာ.........
happy birthday ko prince,
i wish u to be happy in ur birthday.
I also wish u to be luck in all that you do, not just for today , all the years through.
And sorry for my belated wish. :P
happy birthday for ko prince :6::6::6:
ပျော်ရွင်သောယနေ့၊ ဒီအချိန် မှစ ပြီး နောင်နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ တိုင်တိုင် ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့ပါစေလို့
လိပ်မလေး (ကျွန်တော်အင်တာနက်ကနေ သတင်းကြားလိုက်လို့...:)))နဲ့အတူတူ ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့သော ဘ၀ ကိုပိုင်ဆိုင်ပါစေကြောင်း...........
ပြန်လာဦး .... ခုတလော MZ မှာလူတော်တော်စည်နေတယ်။
Happy Birthday ပါဗျာ ....... :6: